काठमाण्डौ । नेपालस्थित फर्चुना इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र चीनको ग्वीझाउ मेरिटाइन्म्स सिल्करोड इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच एक लगानी समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणदलमा रहेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले चीनको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी ग्वीझाउमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन...
आइएमईका प्रिभिलेज कार्डहोल्डरले ग्राण्डी अस्पतालमा ७.५ % छुट पाउने
काठमाण्डौ । काठमाडौं पानीपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको आइएमई लिमिटेड र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ०८, धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबीच गत सोमबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डवाहक सेवाग्राहीहरूले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको सेवामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत विशेष छुट पाउनेछन् । यो सुविधा...
प्रधानमन्त्रीसँगै एफएनसिसिआईको टोली पनि चीन गयो, को-को परे भ्रमणदलमा ?
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीको टोली पनि चीन प्रस्थान गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष राणा सहित निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल,...
काठमाण्डौ । प्रभु समूहले नेपालमा पहिलो नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल भिडियो प्रसारण (डीभीपी–टी २) मा आधारित सेवा सुरु गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले प्रभु टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका हुन् । सरकारबाट लाईसेन्स प्राप्त संस्थाले प्रभु टि.भि. कल साईनमा देशव्यापी रुपमा वर्षको ३६५ दिन नै...
पोखरा । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक विप्रेषण दिवसको अवसरमा आइएमईले पोखरामा शनिबार प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रवासी÷आप्रवासी नागरिकहरूले परिवारको लालनपालन र आफू जन्मेको देशको दिगो आर्थिक विकासमा रेमिटेन्स मार्फत पुर्याउदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको सम्मानमा सन् २०१५ देखि हरेक जुन १६ मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ...
एनटीको पोष्टपेड मोवाइलका ग्राहकले आइएसडी सुविधा आफैं लिन पाउने
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमको जीएसएम तथा सीडीएमए पोष्टपेड मोबाइलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय कलका लागि आईएसडी सुविधा सेवाग्राही आफैंले लिनसक्ने भएका छन् । यो सेवा आज (असार ०१ गते)देखि नै सञ्चालनमा आएकोे छ । आईएसडी सुविधा शुरुमा लिन जीएसएम मोबाइलका लागि "0000" र सीडीएमए मोबाइलका लागि "1234" डिफल्ट पिन नम्बर हुनेछ । जीएसएम...
फिफा वल्र्डकपका प्रत्येक खेलको भविष्यवाणी शिवम् सिमेन्टको फेसबुक पेजमा, मिलाउनेलाई पुरस्कार
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्टले आगामी फिफा विश्वकप २०१८ को अवसरमा आफ्ना फेसबुक फलोअरहरुलाई आफ्नो योजनाअन्तर्गत वल्र्डकप विजेताको भविष्यबाणी गरी आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । हरेक खेलमा हुनसक्ने सम्भावित विजेताहरुको घोषणा गरी उक्त भविष्यबाणी मिलेमा सहभागीले प्रत्येक खेलमा आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्ने कम्पनीले...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप ‘नेपाल टेलिकम’लाई परिमार्जन गरी नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ एपमार्फत नेपाल टेलिकमका जीएसएम, सीडीएमए, पीएसटीएन र एडीएसएल लगायतका सेवाहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो एपमा लग इन गर्नासाथ मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स रकम तथा नेपाल टेलिकमको प्याकेज खरिद गरेको भए सो बारे जानकारी...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुको स्तरोन्नति गर्दै सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्न अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ । कम्पनीले २०७५ असार मसान्तसम्म ४ सय किलोमिटर एडीएसएस अप्टिकल फाइबर जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा ३ सय ७५ किलोमिटर जडान सम्पन्न भइसकेको छ । अब...
एनसेल र एनटीमाथि लाग्यो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई नाकाबन्दी गरेको आरोप !
काठमाण्डौ । नेपाल टेलीकम र एनसेलले पर्याप्त इवान लाइन नदिंदा स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकहरु मर्कामा परेका छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टर कनेक्सन गाइडलाइन(निर्देशिका) अनुसार, टेलिकमहरुले सबै सेवाप्रदायक संस्थाहरुबीच सबैले सबैलाई इवान लाइन उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने यो प्रावधान पालना नगरेको आरोप लागेको छ । जसले...
जेनेभामा पुगेर चन्द्र ढकालद्वारा नेपालमा लगानी गर्न विश्वका लगानीकर्तालाई आह्वान
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा हाल स्थीर सरकार बनेको र लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण भएकोले नेपालका कैयन नयाँ क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०७औँ सत्रलाई बिहीबार सम्बोधन...
बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकोमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बिहीबार बजेटको बिषयमा महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । ‘समृद्धि बिनाको सुख क्षणिक हुन्छ, दीगो हुन सक्दैन ।’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको...
बजेटमाथि उद्योग परिसंघको चिरफार, भन्यो–‘निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई प्राथमिकता दिइयो’
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको आकार महत्वकांक्षी रहेको निश्कर्ष निकाल्दै बजेटको पूर्ण प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुसार प्रस्तुत भएको रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा रु. ८ खर्ब ३१...
एफएनसिसीआईको निमित्त डिजीमा गोपाल तिवारी नियुक्त
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमित्त महानिर्देशकमा गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन् । उनलाई जेष्ठ ९ गते उक्त पदमा नियुक्त गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। सार्वजनिक–निजी क्षेत्र, नेपालस्थित विभिन्न दातृ निकायहरू र संचार क्षेत्रमा लामो समय बिताएका तिवारी पछिल्लो पटक नेपाल...
आजदेखि टेलिकमको मिस्डकल अलर्ट सेवा पुनः सुरु, यसरी लिनुहोस् सेवा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल एलर्ट सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७५ को अवसरमा कम्पनीले सो सेवा आज(जेठ १५ गते)देखि पुनः संचालनमा ल्याएको हो । जीएसएम पोष्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइलमा यो सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा शुभारम्भ भए पश्चात् सेवाग्राहीको नम्बर व्यस्त भएको अवस्थामा, नेटवर्क नभएको अवस्थामा र स्वीच अफ...